Cebu Pacific na-etinye ego na akụrụngwa maka ndị nwere mbenata agagharị
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Inweta njem nleta » Cebu Pacific na-etinye ego na akụrụngwa maka ndị nwere mbenata agagharị
Inweta njem nleta • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Ozi Na -agbasa Ozi Philippines • Ndi akuko • Ịrụ ọrụ • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Edebere Cebu Pacific (CEB) na ọdụ ụgbọ elu ndị nwere nkwarụ (DPLs) n’ọdụ ụgbọ elu dị na Philippines. DPL ndị ahụ ga-enyere ndị nwere mbelata mbugharị (PRMs) aka ịnwe ahụmịhe dị mfe ma dị mfe karị na ụgbọ elu Cebu Pacific.
CEB bụ ụgbọ elu mbụ nke itinye ego na DPL nke ya, na akara ya iji melite ahụmịhe ndị njem. Ojiji nke DPL bu n'efu maka ndị njem Cebu Pacific nwere obere mbugharị. Ewezuga ndị nwere nkwarụ (PWDs), ndị a gụnyere ndị njem dị ime na ndị agadi nwere ike isiri ha ike ịrị steepụ iji banye ụgbọ elu ha.
CEB etinyela ego karịrị nde PHP100 maka ị nweta na ntinye 35 nke DPL ọhụrụ. Ejiri DPL mbụ na Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 na Machị 2017 maka ule na nyocha. Kemgbe July 2017, a na-eji DPL ebuli PWDs, ndị ime na ndị agadi njem na ọnụọgụ ụgbọ elu CEB.
Michael Ivan Shau, osote onye isi oche maka Ọrụ Ọdụ ụgbọ elu nke Cebu Pacific kwuru na etinyere akụkụ DPL ndị ọzọ ka a ga-arụbido malite 2018. A ga-etinye nkeji isii ọzọ na NAIA Terminal 3, ebe ndị ọzọ gafere na mpaghara CEB ndị ọzọ na mba ahụ, ya bụ, Clark, Kalibo, Iloilo, Cebu na Davao; yana ọdụ ụgbọ elu dị elu na mba ahụ na CEB na-eji ụgbọ elu Airbus arụ ọrụ. Mmezu ebumnuche bụ site na June 2018.
“Anyị na-elele atumatu iji melite ahụmịhe ndị njem maka Onyebuchi Maka ndị njem anyị PWD na ndị nwere obere mbugharị, anyị ghọtara na ahụmịhe nke ibuli aka gị nwere ike iru ala. Itinye ego na DPLs ga - enyere anyị aka ịbanye ma kwatuo ndị njem na ịgagharị agagharị na enweghị nsogbu, yana obere erughị ala, ”ka Shau kwuru.
N’afọ 2016 naanị, ndị njem karịrị puku iri anọ na atọ nwetara oche nkwagharị site na tebụl ndenye ego. N'ime ọnụ ọgụgụ a, ihe karịrị puku iri na anọ nwere ụkwụ ụkwụ na mpempe akwụkwọ ndenye ego wee buru ha gaa n'oche ha n'ụgbọ elu ahụ.
E webatara DPL na 1998 site na ndị na-eweta ọrụ ụgbọ elu mba ofesi Airport Maintenance Services –Ground Service Equipment iji nye ọdụ ụgbọelu nchekwa, ntụsara ahụ ma nwee nsọpụrụ iji nweta PRM na ụgbọelu. DPL na-enye ndị PRM ohere, yana ndị ibe ha ma ọ bụ ndị ọrụ ha ịbanye n'ụgbọ elu ma ọ bụ ịdaba site n'ọnụ ụzọ ụgbọ elu ndị ụgbọ elu họpụtara. Ruo taa, enwere ma ọ dịkarịa ala 500 DPLs ejiri n'ụwa nile.
Maka PWDs na ndị ọzọ PRM ndị chọrọ enyemaka oche ọlụsị, ọ dị ha mkpa ịka akara n'igbe na-egosi ihe achọrọ maka ịdebanye ụgbọ elu ha.
Usoro kachasị na akụkọ ihe mere eme: United na-agbakwunye Booming 270 na ...
Japan iji belata mgbochi mgbochi maka ọgwụ mgbochi ...
Malta Ugbu a na-anabata Kaadị ịgba ọgwụ mgbochi America
Emirates maliteghachiri ụgbọ elu Mauritius, dị ka agwaetiti ...
Ndị mmadụ na -agbago elu n'oge ọrịa na -efe efe na ...
3 mmadụ gburu, 99 na-efu na Miami ogige ida
Ọnwụ na -amalite n'ọnwa Ọgọst: Seychelles dekọrọ ọmarịcha ...
Ụdị Lambda dị iche: Nguzogide ọgwụ mgbochi yana ndị ọzọ ...
Warningdọ aka na ntị nke US Embassy na Eswatini: Nọrọ n'ụlọ!
33% nke ndị America agbabeghị ọgwụ mgbochi kwuru na ha agaghị enweta ...
Ọdachi maka ụlọ ọrụ njem nlegharị anya nke Israel na -abịa njem ...
Ntuli aka Guinea: Onye isi ala jidere, gọọmentị etisasịwo ...